Accueil > Divers > Fifidianana: Leo mpangalatra sy mpamono olona ny Malagasy
Fifidianana: Leo mpangalatra sy mpamono olona ny Malagasy
Tena milaza azy ho tiam-bahoaka ny kandidà hilatsaka hofidiana ho filoham-pirenena amin’ity taona 2018 ity. Fahadisoam-panantenana tanteraka nefa no vokatry ny fitondrana nataon’izy ireo tao anatin’ny taona maro nitondran’izy ireo izay. Marina dia marina tokoa fa misy ny Malagasy izay mbola mifikitra amin’izy ireny nefa dia azo lazaina tsy ampihambahambana fa ireo ilay miaro tombotsoa manokana sisa ijoroany ao fa tsy miraharaha akory izay firenena intsony. Misy aza amin’izy ireny no tapa-dàlan-kaleha ka dia tsy maintsy miaraka amin’ireo mpangalatra sy mpamono olona ireo.
Nahazoan’ny Malagasy nisaina ny fitondran’ingahy Ravalomanana Marc nanomboka ny taona 2001 ka hatramin’ny 2009.Nampitondra faisana ny Malagasy maro iny fanjakana iny noho ny fangalarana volam-bahoaka, fanodinkodinana ny harem-pirenena ka nanombohan’ny fanondranana andramena antsokosoka tany ivelany, ary mbola olana lehibe tamin’izany koa ny fivarotana an’i Madagasikara tamin’ireo mpanam-bola vahiny. Ny fanapotehana ny tantsaha Malagasy ka ny fanondranana ny omby tsy ampiheverana tany ampitan-dranomasina izay nosoloina ombivavy be ronono. Toa izany koa ny fanjakana Tetezamita nentin’ingahy Andry Nirina Rajoelina nanomboka ny taona 2009 ka hatramin’ny 2013, izay nisehoan’ny halatra nataon’ny mpitondra sy ny fanodinkodinana volam-bahoaka ary ny kolikoly sy ny asan-dahalo tsy roa aman-tany. Iny fanjakana nentin’ingahy Andry Nirina Rajoelina iny no nisehoan’ny dahalom-panjakana voalohany indrindra tamin’ny fanondranana omby velona tany ivelany ka nampitondra faisana ny tambanivohitra maneranaan’i Madagasikara fa indrindra ny tany amin’ny faritra Atsimo.
Fitondrana farany izao dia tena nandiso fanatenana tanteraka ny Malagasy. Ny fanjakan’ingahy Hery Rajaonarimampianina dia kolikoly, fanodinkodinana volam-bahoaka, asan-dahalo, asan-jiolahy sy “kidnapping” izay nampiroborobo ny fanaovana takalon’aina teto Madagasikara. Iza moa no tsy mahalala fa tena ny fanjakana tetezamita iny no nisian’ny fanondranana volamena an-tsokosoko indrindra nataon’ny olona teo amin’ny fitondrana sy ny mpiaradia aminy. Tsy tenenina intsony ny fanondranana andramena sy ny fandravana ny tontolo iainana teto Madagasikara ka naharingitra ny ala atsinanana.
Raha toa ka maro ny olona maty tamin’ny fidiran’ingahy Ravalomanana Marc an-keriny tamin’ny fitondrana tamin’ny toana 2001, izay tsy lany akory fa nanao fanonganam-panjakana niaraka tamin’ingahy Ratsirahonana Norbert Lala tamin’ny alalan’ny hoe “1er tour dia vita” na dia tsy nandresy ny Amiraly Didier Ratsiraka aza tamin’ny fifidianana 2001 iny, dia nahatratra 1681 no olona nampidiriny am-ponja noho ny tsy fitoviana hevitra. Maro no maty tamin’izany.
Tsy niraharaha raha tsy hampanakarena ny tenany izy ireo. Fantaro ny momba ny harenan’izy ireo azony tao anatin’ny taona vitsy nitondrany izay dia ho hitanao fa tsy olona mendrika hitondra firenena intsony izy telo lahy ireo.
Tsy lany olomanga i Madagasikara. Maro no olon-kedry sy manampanahy ary manam-pahaizana sy matahotra an’Andriamanitra izay mbola afaka manarina ity firenena ity. Araka ny voalazan’ny SEFAFI (Sehatra fanaraha-maso ny fiainam-pirenena) tamin’ny zoma 02 martsa 2018 lasa teo fa tokony hiditra amin’ny “vote sanction” na tsy fifidianana ireo olona ireo intsony ny Malagasy.